Anyanwụ ndị na-emepụta anwụ - China Sun Visor Caps Factory & Suppliers
Egwuregwu Egwuregwu Anyanwụ Anyanwụ n'èzí maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị
Nko na Loop mmechi
Na-enweta Glare na Anya Gị: you na-arịa ọrịa ma na-agwụ ike nke anyanwụ na-abanye n'anya gị, ha niile na-emechi gị nwa oge. Nke ahụ bụ ihe anyị nọ ebe a maka. Ihe mkpuchi visorx ndị a na-agbanwe agbanwe ga-eme ka anya gị ghara ịpụ n'anya, ma yie ezigbo mma mgbe ị na-eme ya.
Ọmarịcha egwuregwu na egwuregwu a na-eme n'èzí: Nke a oime ụlọ sọdụ ụgbọ mmiri sun visor hatọ Ezubere ka ọ dị fechaa, ume na nkasi obi. Ha agatụghị enweta gị, yabụ ha bụ ngwa zuru oke maka ịnya ụgbọ ala, ịgba mwe mwe ọsọ, egwuregwu na egwuregwu ndị ọzọ.
Adịchaghị Ogo Ihe onwunwe: mgbe ọ na-abịa anyị oime ụlọ sọdụ ụgbọ mmiri sun visor hnas, anyị na-ekwu na iji ihe ọ bụla ma ọ bụ naanị mma kacha mma eji eji akwa owu, yana usoro mmepụta ọgbara ọhụrụ na njikwa njikwa dị mma.
Trendy na Nkecha ngwa: oime ụlọ sọdụ ụgbọ mmiri sun visor hatọ s bụ karịa ụzọ iji chebe onwe gị pụọ na anyanwụ, ma ọ bụ otu ngwa egwuregwu. Ha na-n'ezie trendy ejiji ngwa, na a oké ụzọ elu anya ihe mepere emepe egwuregwu ma ọ bụ ukporo style.
Mgbanwe a na-eme ka anwụ anwụ na-acha anwụ anwụ maka egwuregwu ịgba bọọlụ
Njirimara: A na-ewepụ okpu visors ndị nwere ike ikpuchi ihu, nwee nnukwu nchedo UV.
Size: nke a Mgbanwe a na-eme ka anwụ anwụ na-acha anwụ anwụ maka egwuregwu ịgba bọọlụ , Otu Nke Kacha Mma. Na mmechi mmechi Velcro.